I-China Flour Blending Production kunye neFektri | IChinatown
Okokuqala, umgangatho owahlukileyo kunye namahlelo ahlukeneyo omgubo oveliswa kwigumbi lokugaya athunyelwa kwimigqomo eyahlukeneyo yokugcina izixhobo ngokuhambisa izixhobo zokugcina.
Okokuqala, umgangatho owahlukileyo kunye namahlelo ahlukeneyo omgubo oveliswa kwigumbi lokugaya athunyelwa kwimigqomo eyahlukeneyo yokugcina izixhobo ngokuhambisa izixhobo zokugcina. Le mifula ibizwa ngokuba ngumgubo osisiseko. Phambi kokuba umgubo osisiseko ungene kwindawo yokugcina izinto, kufuneka uhambe ngeenkqubo zokuhlola umgubo, ukubala umlinganiso, ukwahlukana ngemagnethi kunye nokubulala izinambuzane. Xa kufuneka umgubo wokuxuba, umgubo osisiseko weentlobo ezahlukeneyo ekufuneka utshatisiwe uyakhutshwa emgqomeni, uxutywe ngokudibanisa umlinganiso othile, kwaye kongezwa izongezo ezahlukeneyo njengoko kufuneka, umgubo ogqityiweyo wenziwa emva kokudibanisa nokudibanisa. Ngokusekwe kwiyantlukwano yeentlobo ezahlukeneyo zomgubo osisiseko, umlinganiso ohlukeneyo weeflawu ezisisiseko ezahlukeneyo, kunye nezongezo ezahlukeneyo, amabakala ahlukeneyo okanye iintlobo ezahlukeneyo zomgubo okhethekileyo unokuxutywa kwaye ufezekiswe.
Izixhobo zokuxuba umgubo
Uxinzelelo oluqinisekileyo lomoya
Iindlela ezimbini zeValve
Isihluzi seJet soxinzelelo
Isixhobo sokuhambisa esiyiTubular
Isikali seBatch Flour
Ukusetyenziswa kokuxutywa komgubo (ukutya okunzulu kushishino)
Le nkqubo ibandakanya ukuhanjiswa kwomoya kunye nokugcinwa kwepowder eninzi, itoni yomgubo kunye nomgubo omncinci wepakethe. Isebenzisa i-PLC + isikrini sokuchukumisa ukuqonda ukuhambisa okuzenzekelayo kunye nokusasazwa komgubo, kwaye amanzi okanye igrisi inokongezwa ngokufanelekileyo, okunciphisa ukusebenza kunye nokuphepha ungcoliseko lothuli.
Amatyala okuDibanisa umgubo
Indibano yocweyo yokuxuba umgubo wokuxuba umgubo kwimigqomo eyahlukileyo yomgubo ukuqinisekisa uzinzo kwimveliso yokugqibela.
Indibano yocweyo yokuxuba umgubo wokuxuba iintlobo ezahlukeneyo zomgubo ngokomlinganiso wokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zomgubo osebenzayo, njengokulahla umgubo, umgubo we-noodle kunye nomgubo we-bun.
Umasifundisane wemveliso yefektri ye-noodle yamkela umgqomo we-stainless steel powder kunye ne-batching scale. Umgubo kwindawo yomgubo omninzi umgubo womoya uhanjisiwe kwisikali sokubamba somlinganiso ochanekileyo, ogcina inkqubo yokukhutshwa kukhutshwa ngesandla kwaye kuthintela imeko yokuba abasebenzi bongeze inani elingalunganga lomgubo.
Kwi-Flour Blending workshop yefektri ye-noodle, izithako ezininzi zongezwa ngokulinganayo kumgubo ukuvelisa iintlobo ezahlukeneyo ze-noodle.
Umasifundisane wokugalela umgubo kumzi-mveliso weebhiskithi wongeza izithako ezininzi kumgubo ngobungakanani. Yenziwe ngayo yonke intsimbi engenasici kwaye inqanaba lokutya elichasene nokubola.
Kwimveliso yokusebenzela yefektri yeebhiskithi, umgubo wawuza kungena kumxube wokuxuba emva kokulinganiswa nokudityaniswa.
Okulandelayo: Uluhlu lweMLT Degerminator